Kororso Aqoontaada Su’aalo iyo Jawaabo oo Diini ah iyo Aqoon Guud | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	Britain oo ka walaacsan in dadka u dhashay dalkeeda, lagu dilay weerarkii UNDP Raa’isal Wasaare Saacid oo lagu cadaadiyay inuu xilka isaga deggo Barrack Obama oo sheegay in wax laga naxo ay shalay ka dhaceen Magaalada Muqdisho Sheekh Cali Dheere oo sheegay in seefta Al Shabaab ay qaaday Gaalo badan Daawo Video: Gudoomiayaha golaha fulinta ahlusuna oo kawarbixiyay heshiiskii Ahlusuna iyo dowladda halka oo marayo Daawo Sawirada: Nicholas Kay iyo Raa’isal Wasaaraha oo ka hadlay weerarkii Dhismaha UNDP Daawo Video: Weerarkii maanta lagu qaaday Xarunta UNDP ee Magaalada Muqdisho WAR DEG DEG: Wasiirka Arrimaha Gudaha oo sheegay in Saraakiil Ajnabi ah lagu dilay weerarkii UNDP Ciidamada Alpha Group oo xoog ku galay Xarunta UNDP oo weerar qorsheysan lagu qaaday, lana wareegay gacan ku heynta Dhismahaasi WAR DEG DEG: Al Shabaab oo sheegatay masuuliyada weerarka Xarunta UNDP By: Mastar // Jul 24 2012 at 10:23 am // 1,142 Reads // Wararka Somalia Kororso Aqoontaada Su’aalo iyo Jawaabo oo Diini ah iyo Aqoon Guud Share Tweet
Waa barnaamij weydiin iyo war-celin ah, amaba Su’aalo iyo Jawaabo ah, oo aanu soo daabici doono inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, haddii uu Alle raali ka noqdo.
1-Su’aal, Sheeg kumuu ahaa Gabayaagii Rasuulka (NNKH)?
1-Jawab, Gabayaagii Rasuulka (NNKH) wuxu ahaa Xasaan Binu Thaabit.
2-Su’aal, Sheeg imisa sano ayey dacwadu (Fidinta Diinta) qarsoodi ehayd?
2-Jawab, Waxay dacwadu qarsoodi ahayd muddo saddex sano ah (3 sano).
3-Jawab, Waxay kala ahaayeen, 1- Hooyo Khadiija Bintu Khuweylad rc, 2- Cali Bin Abii Daalib rc, 3-Abuu-bakar rc, 4-Sayid Binu Thaabit rc, 5- Cusmaan Bin Cafaan rc, 6-Subeyr Bin Cawaam rc, 7- Cabdi Raxmaan Bin Cowf rc, 8- Sacad Bin Abii waqaas rc, 9-Dalxa Bin Cubeydillah rc,
6-Sheeg, Markii ay Muhaajiriinta u haajireen Xabasho, Kufaartii Qureysh waxay ka daba diren Labo nin, sii’ay Boqorka hadiyad ugu geeyaan, Muhaajiriintana gacantooda loo-soo geliyo, hadaba sheeg labadaas nin magacyadooda?
6-Jawab, Waxay kala ahaayeen Cumar Bin Caas iyo Cabdullaahi Bin Abii Raabica.
7-Jawab, wuxuu soo Islaamay sanadkii lixaad ee Nabinimada. Nabiga (NNKH) oo 6 sano nebi ah ayuu soo islaamay Xamza. Sidoo kale sanadkaasi waxaa soo Islaamay Cumar Bin Khadaab.
8-Su’aal, Sheeg Xamza RC iyo Cumar Bin Khadaab imisa maalmood ayey kala dambeeyeen soo galitaanka Diinta Islaamka?
9-Su’aal, Sheeg goorma ayay dhacday Hijradii uu Rasuulka (NNKH) ka soo Hijrooday Maka una soo Hijrooday Madiina?
10-Su’aal, Sheeg markii Nebiga (NNKH) uu Madiina u Hijroonaayey kumuu ahaa Asxaabigii la-socday?
10-Jawab, waxa la-socday asxaabikiisii Godka, waa Abuu Bakar Sidiiq (RC).
11-Jawab, waa ciidanka Shiinaha (China).
12-Jawab, waa ciidanka Dowladda Maraykanka.
13-Su’aal, Sheeg warshada sonkor ee Isnaay oo ku taalla Magaalada Kowhar sanadkii la-aas-aasay?
13-Jawab. waxaa la-aas-aasay sanadkii 1925-kii
14- Su’aal, Sheeg magaalada kaliya ee Soomaaliya uu bariiska ka baxo?
14-Jawab, waa Magaalada Jowhar ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
16-Jawab, wuxuu dhashay sanadkii 1943-kii
17-Jawab, waxay qaadatay 27 June 1977.
20-Sheeg sanadkii la-qoray farta af Soomaaliga?